Ireo fitsipika etika efatra no tena tena homarinana avy amin'ny roa hafa saro-takarina etika rafitra: consequentialism sy deontology. Ny fahatakarana ireo rafitra no mahasoa, satria izany dia hanampy anao hamantatra ary avy eo dia mieritreritra ny iray amin'ireo fototra indrindra fihenjanana amin'ny fikarohana fitsipika: raha afaka mampiasa mety unethical fitaovana mba hahazoana ny etika farany.
Consequentialism, izay manana ny fakany amin'ny asan'ny Jeremy Bentham sy John Stuart Mill, dia mifantoka amin'ny fihetsika maka izay mitarika ho amin'ny tsara kokoa firenena eo amin'izao tontolo izao (Sinnott-Armstrong 2014) . Ny fitsipiky ny Beneficence, izay mifantoka amin'ny mety mahay mampifandanja sy ny tombontsoa, ​​dia miorim-paka lalina ao amin'ny consequentialist fisainana. Etsy an-danin'izany, deontology, izay manana ny fakany amin'ny asan'ny Imanoela Kant, mifantoka amin'ny etika andraikitra, tsy miankina ny vokany (Alexander and Moore 2015) . Ny fitsipiky ny fanajana ny olona, ​​izay mifantoka amin'ny fizakantena ny mpandray anjara, dia miorim-paka lalina ao amin'ny deontological fisainana. Ny fomba haingana sy hiteny ratsy ny manavaka ny rafitra roa dia ny hoe consequentialists hifantoka amin'ny faran'ny sy deontologists hifantoka amin'ny fitaovana.
Mba hahitana ny fomba rafitra roa ireo dia afaka mitovy, Diniho nampahafantatra manaiky. Samy rafitra azo ampiasaina mba hanohanana fahalalana ampy fanekena, fa noho ny antony samy hafa. Ny tohan-kevitra ho an'ny fahalalana ampy consequentialist fanekena dia manampy mba hisorohana ny loza ny mpandray anjara amin'ny alalan'ny fikarohana izay mandrara tsy araka ny tokony ho fandanjana sy mialoha ny fotoana mety handray soa. Amin'ny teny hafa, consequentialist fisainana dia hanohana fahalalana ampy fanekena satria manampy hisorohana ny vokatra ratsy ho an'ny mpandray anjara. Na izany aza, dia deontological tohan-kevitra ho an'ny fahalalana ampy fanekena dia mifantoka amin'ny mpikaroka ny adidy hanaja ny fizakantena ny ny mpandray anjara. Noho ireo fomba, madio consequentialist mety ho vonona ny waive ny fepetra takiana ho an'ny fahalalana ampy fanekena ao amin'ny toerana izay tsy nisy mety, kosa madio deontologist mba tsy.
Samy consequentialism sy deontology manolotra zava-dehibe etika lalin-tsaina, fa samy azo entina any mitombina tafahoatra. Fa consequentialism, iray aza amin'ireny toe-javatra tafahoatra mety hatao hoe Transplant. Sary an-tsaina ny dokotera izay manana dimy marary maty ny taova tsy fahombiazana ary ny iray ara-pahasalamana taova marary izay afaka mamonjy ny dimy. Teo ambanin'ny fepetra sasany, ny consequenalist dokotera dia havela-ary na dia ilaina-hamono ny marary ara-pahasalamana hahazo ny taova. Io fifantohana tanteraka amin'ny faran'ny, tsy momba ny fitaovana, ny tsininy.
Toy izany koa, deontology mety ho voasambotra koa ho hafahafa tafahoatra, toy ny ao amin'ny raharaha izay mety hatao hoe Timebomb. Sary an-tsaina ny mpitandro filaminana izay efa voasambotra mpampihorohoro izay mahafantatra ny toerana misy ny ticking timebomb izay hamono olona an-tapitrisany. A deontological polisy tsy handainga mba namitaka ny mpampihorohoro any mampiseho ny toerana misy ny baomba. Io fifantohana tanteraka amin'ny fitaovana, tsy misy resaka faran'ny, ihany koa no tsininy.
Amin'ny fomba fanao, ny ankamaroan'ny mpikaroka ara-tsosialy manaiky tanteraka ny mifangaro amin'izy roa lahy ireto rafitra etika. Raha nahatsikaritra izany mampifangaro ny etika sekoly manampy panazavana mikasika ny antony maro adihevitra-etika izay matetika no eo izay consequentialist kokoa sy ireo izay kokoa deontological-fa aza manao be fandrosoana. Ireo adihevitra consequentialists zara raha hamaha satria manolotra hevitra momba ny faran'ny, hevitra izay tsy mandresy lahatra ny deontologists izay manahy ny fitaovana. Toy izany koa, deontologists mazàna ny hanolotra hevitra momba ny fomba, izay tsy mandresy lahatra ny consequentialists izay mifantoka amin'ny faran'ny. Hevitra eo consequentialists sy ny deontologists dia tahaka ny sambo roa nandalo amin'ny alina.
Iray vahaolana ireo adihevitra ho an'ny mpikaroka ara-tsosialy mba hampivelatra ny tapaka, fitondran-tena mafy orina, ary mora-to-hampihatra mifangaro ny consequentialism sy deontology. Indrisy anefa, izany inoana hitranga; filozofa no miasa amin'ny ireo olana nandritra ny fotoana maharitra. Noho izany, mihevitra aho fa ny hany Mazava ho azy fa ny zavatra dia ny manaiky fa miasa avy mifanaraka fototry sy muddle handroso.